Accueil > Gazetin'ny nosy > Ntsay Christian: Na hiala na hanova governemanta
Enin’andro izao no nahatafatsangana ny governemantan’i Ntsay Christian, izay praiminisitrin’ingahy Andry Nirina Rajoelina ka manantanteraka ny baikon’ingahy Hery Rajaorimampianina. Ny fanambarany tany amboalohany nataon’ingahy Ntsay Christian fa ingahy Andry Nirina Rajoelina no nanolotra azy amin’ny toeran’ny praiminisitra ity. Noho izany dia ny Mapar no tokony ho maro an’isa ao amin’ny governemanta fa tsy ny HVM ( Hery Vaovao hoan’i Madagasikara) velively. Minisitra Mapar dia iarahana mahalala fa miisa 7, ary ny HVM dia 19.
Eo anatrehan’ny fitakiana teny amin’ny 13 may dia niteraka disadisa tao amin’ny mpitaky ny fanovana iny raharaha iny satria nizara roa tanteraka ny mpitarika ankehitriny. Ireo izay nahazo toerana dia namonjy an’ingahy Ntsay Christian. Ny tsy faly kosa dia mbola manohy ny tolona etsy amin’ny kianjan’ny 13 may, miampy ny olona tsy faly tamin’iny raharaha iny, izay misokajy ny fihetsik’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy Ravalomanana Marc ho mpamadika tanindrazana.
Noho izany dia io iarahana mahita io ny raharaham-pirenena fa mikatso tanteraka. Tsy mbola nisy hatramin’izay nisian’ny fitondrana teto Madagasikara ka amin’ny andro alina no manao fifamindram-pitantanana ny ministra miala sy ny vaovao, toa ny nahazo an’ingahy Maharante Jean de Dieu io. Miampy isan’ andro aman’alina koa ny sendika manao fitakiana nanampy ny eo amin’ny kianjan’ny 13 may hatramin’izay fananganana ny governemanta izay. Ny fampianarana amin’ny fanjakana rehetra dia mbola miantona fa hanohy ny fitakiana ny fanovana ihany. Zara raha misy 30% ny sekoly no mianatra. Ny fanadinana koa dia mikatso izao toa ny fanatanjahantena.
Ny ministeran’ny vola dia mbola tsy mijanona ny fanaovana grevy. Ny ministeran’ny serasera dia io iarahana mahita io ny tsy fankatoavan’ny olona ny minisitra Rina Andriamandavy VII.
Ny tao amin’ny fiadidiana ny primatiora aza dia iny nanala tena iny ny tale ny kabinetran’ity andrimpanjakana ity raha mbola herinandro fotsiny no nanendrena azy noho ny fanakiana mafy sy mavaivay nahazo azy.
Andanin’ireo dia mahazo vahana koa ny hetsika ny fanarenana ifotony (HFI) izay ivondronan’ny mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena ary ny olo-tsotra maro izay tsy manaiky izao fomba noraisin’ingahy Hery Rajaonarimampianina sy ny HCC ( fahefana avo momba ny lalàmpanorenana) tarihin’ingahy Eric Rakotoarisoa izay mahay milomano sy fetsifetsy lahy ary mitazona mafy an’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny toerany.
Tsy naha vahaolana ingahy Ntsay Christian hatramin’izao fa mihodinkodina toy ny tandrimo.
Ny tsy fandehanan’ny raharaha izao dia manery an’ingahy Ntsay Christian hiala na hanova governemanta haingana raha tiany ny tsy hampiditra an’ny Malagasy ao anatin’ny krizy lalina indray. Tsy azo antoka intsony ny hahavita ny fifidianana ao anatin’ny fotoana fohy sy amin’ity taona ity.